COUVEUSE (Incubateur) MIKOTRIKA AKOHO SY VORONA · L'Homme, son aura et son évolution
> COUVEUSE (Incubateur) MIKOTRIKA AKOHO SY VORONA
Classé dans : — cyrius @ 12:24
Maro atody ny gana, sady lehibe ny atodiny no tsara, fa tsy tia mikotrika.
Aleon’ny gana mandany fotoana hiarahany milalao amin’ny namany, toy izay hipetraka hikotrika.
Vahaolana hanakotrehana ny atodin-gana izany ny fampiasana incubateur (couveuse).
Afaka mamorona couveuse (Incubateur) électrique ho anao ny tenako avy amina fitaovana recyclés toy ny plastika sy hazo ny tenako Cyrius, amin’ny vidiny mirary, sady tsy mandany.
Tsara ny fanakotrehana akoho, satria tia mikotrika koa ny akoho.
Kotrehiny avokoa, na atodin-gana, na atodim-borontsiloza, na atodin’akoho, na atodin-dokotra.
Fa afaka manatody matetika sy maromaro kokoa nefa izy raha tsy ampikotrehina.
Avelao ny akoho hitohy hanatody maro kokoa sy matetika kokoa.
Mampiasa incubateur (couveuse) hikotrika ny atodin-gana, ny atodin’akoho, ny atodin-gisa, ny atodim-borontsiloza, ny atodin-dokotra, ny atodina papelika koa.
NY VORINTSILOZA MPIKOTRIKA
Mikotrika ny vorontsiloza, na ny vorontsiloza lahy, na ny vorontsiloza vavy.
Ary mahazaka mikotrika atody maro mihitsy, ny vorontsiloza iray mikotrika atody 60 no ho mihoatra, raha atodin-gana, na atodin’akoho, na atodin-dokotra na atodin-gisa. Afaka mikotrika ny atodiny koa nefa ny vorontsiloza.
Afaka manatody mihoatry ny 100 nefa ny vorontsiloza mandritry ny taona iray raha tsy ampikotrehina.
Raha ampikotrehinao ny vorontsiloza, sady mihamahia izy avy eo no tsy afaka mitohy manatody, raha tsy fotoana lava aorian’ny fikotrehany indray.
Avelao hitohy hanatody ny vorontsiloza, couveuse (incubateur) ampiasaina hikotrika ny atodin-gana, ny atodin’akoho, ny atodin-gisa, ny atodim-borontsiloza, ny atodin-dokotra, ny atodina papelika koa. Afaka mamorona couveuse (Incubateur) ho anao ny tenako avy amina fitaovana recyclés toy ny plastika sy hazo.
NY ARETINA ; NY AKOHO SY VORONA MIKOTRIKA
Hihamangatsiaka ny andro manomboka ny 03 jiona, hifarana eo mantsy ny fahavaratra.
Mety ho avy manaraka an’izay koa ny areti-mifindra maro mpahazo ny akoho amam-borona.
Ary mety ho tratrany hatramin’ny amam-borona mikotrika na tokony hikotrika.
Efa hitanao angamba ny akoho amam-borona maty eo am-pikotrehana.
Efa hitanao angamba ny akoho amam-borona maty nefa ny atodiny miandry hokotrehany.
Misy koa ny akoho tsy mahafoy afa-tsy atody vitsy monja ka mamono antoka.
Aza maika ny handevin-tsotrobe nefa, na manta aza ny vary, mety indray , indroa, tsy maninona, misy ny vahaolana. couveuse (incubateur) ampiasaina hikotrika ny atodin-gana, ny atodin’akoho, ny atodin-gisa, ny atodim-borontsiloza, ny atodin-dokotra, ny atodina papelika koa.